Posted by htet way on Jan 26, 2012 in Health & Fitness | 30 comments
ကျွန်တော် တင်ပြထားသလို လုပ်ကြည့်ပါ
အနည်းအများတော့ အကျိုးထူးခံစားရမှာပါ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်
ဆက်လက်တင်ပြပေးပါ့မယ်။ မြဲဖို့တော့လိုပါတယ် ။
ဆရာကိုရင်ထက်ဝေရေ… ရွာထဲမှာ ရေးအားတက်လာတာရော…။
ဆေးနည်းပညာတွေကိုပါ အမြစ်ဖော် အစစ်ပေါ်အောင် ဖော်ပြပေးနေတဲ့အတွက်
ကျနော်ကတော့ ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူနေပါတယ်ဗျာ…
နောက်လှည့်ရင် ကိုရင့်မျက်နှာပြဲပြဲကြီးနဲ့ အားပေးနေတယ်လို့သာ
ပိန်ချင်တဲ့သူတွေ တော်တော်များတယ်နော် …
ပိန်ဆေးဆိုရင်လဲ သိပ်လိုချင်ကြတယ် … ဒါပေမယ့် အစားနဲ့ အအိပ်ကျတော့ မလျော့နိုင်ကြဘူးလေ …
မဝေေ၀ရော ပိန်ချင်လို့လား …
ကျေးဇူးပါ။ လုပ်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်။ မလုပ်မှီပုံရိုက်ထားမယ်။ လုပ်ပြီးပုံရိုက်လိုက်မယ်။ ပြီးရင်မန်းဂေဇက်မှာကြေငြာပေးမယ်။ ဆရာထက်ဝေးနာမည်ကြီးအောင်။
မဝေေ၀ရေ ပိန်ချင်လို့အစားရောအအိပ်ရောလျော့ပြီးလေ့ကျင်ခန်းလုပ်တာတောင်ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုဝလာတယ်မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ၀၀နေလို့အမရေ။ ပိန်ဆေးတွေတော့မသောက်ရဲဘူး။
ဟုတ်ပါရဲ့ မသဲနုအေးရေ .. ကျွန်မလည်း … အရင်ထက် နည်းနည်း ပိုဝိတ်တက်လာတာကြောင့် (၀လွန်းတဲ့ အချိုးစားတော့မဟုတ်သေး) နည်းနည်း ပြန်ထိန်းရင်းလျှော့နေတာတောင် .. ဆက်တိုက်ကို တက်လာတော့တာပဲ … ။ အိပ်တာဆိုလည်း .. တနေ့ 6နာရီလောက်ပဲ .. စားတာလည်း … သိပ်မများ …. နေ၀င်နေထွက်အလုပ်လုပ်ရလို့ စိတ်ဖိစီးမှုများလို့ ပင်ပန်းတာမျိုးလားပဲ … ။
ကိုထက်ဝေးနဲ့ အန်ကယ်နေချားတို့ ပြောနေတဲ့ ပိန်ဆေးပို့စ်ကို ဖတ်မိလို့ ကိုထက်ဝေးဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး ပိန်ဆေးအကြောင်းမေးကြည့်သေးတယ် … အစာအိမ်ခဏခဏယောင်တတ်လို့ .. ရှောက်ရည်ညှစ်သောက်ဖို့ အဆင်မပြေပေမယ့် … ဆေးလိမ်တာတော့ … စမ်းလုပ်ကြည့်ဦးမယ် .. တကယ်ကျသွားလျှင် … ရွာထဲလှည့်ပြီး မောင်းခတ်ဦးမယ် … ။
အခုတီဗွီမှာကြောငြာနေတာက .. ဆီးသီးအနှစ်ရေသောက်ရမယ်ဆိုပဲ ….. အဲ့ဒီတစ်ပုလင်းက သူများ မိသားစုတွေ .. ထမင်းစရိတ်တရက်စာလောက်ရှိတယ် .. မွဲကိန်းပဲ
ဟုတ်ပဟုတ်ပ။ အဲဒီဆီးသီးအနှစ်သာနေ့တိုင်းသောက်ရရင်တော့တပုလင်းသောက် ရင်တအိမ်လုံးပိန်မှာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တအိမ်လုံးနေ့တိုင်းဆန်ပြုတ်ပဲသောက် ရတော့မှာ။ ဈေးဖိုးထဲကဆီးသီးအနှစ်ရည်ဖိုးနှုတ်လိုက်လို့။
မအီးတုံးပြောတာ vita မလား
အမလေးမသောက်နဲ့ တစ်ပုလင်း ၁၅၀၀
ဆေးတွေကို နောက်နေ့မှ သွားဝယ်လိုက်ဦးမယ် ဆရာထက်ရေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူကို ပုံဖျက်နေတဲ့ ဗိုက် ကိုတော့
ဖြစ်နိုင်ရင် လှီးကို ထုတ်ချင်တာ…။
အစားအသောက် အအိပ်အနေ မဆင်ခြင်နိုင်သေးဘူး။
ဆရာစားမချန် ဆေးနည်းအကုန် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေးထားတာ ချီးကျူးပါတယ်။
ဆရာထက်ရေ – သိပ္ပံနည်းကျ ခေါ်မလား၊ လက်တွေ့ကျတယ်ခေါ်မလား။
အဲဒါ တကယ် နည်းလမ်းမှန်တယ် ထင်ပါတယ်။
လွတ်နေတာလေးတွေ ကို ဖြည့်ပြီး ကျင့်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
တကယ်ကို ကျေးဇူးပါ။ :-)
ဆရာထက်ရေ .. ဗိုက်ချပ်နည်းလေး သိရလို့ ကျေးဇူးပါ
လူကမဝပင်မယ့် တစ်နေ့တစ်နေ့ အထိုင်များလို့ ဗိုက်ပူလာတယ်ဆိုပြီး
စိတ်ညစ်နေတာ အခုတော့ ဆေးနည်းလေးရသွားလို့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ့မယ် …..
ညစာစားအပြီး တစ်နာရီအတွင်း မအိပ်ဖို့လည်း အကြံပြုလိုပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင်လမ်းလျောက်ပေးပါ
ညစာကို အညိုရောင်အသားဆိုရင် ထမင်းကို ထမင်းပန်ကန်လုံး တစ်လုံးထက် ပိုမစားပါနဲ့ အရွက်ဟင်း
အရည်သောက်ဖြစ်ရင် သင့်တော်ပါတယ် ဒိန်ချင်ကိုသကြားမပါ (သကြားလျှော့)ထမင်းစားပြီးရင်သောက်ပါ
ဒါပေမဲ့..နဲနဲစားလိုက်တာနဲ့ဝ.၀ လာတယ်..
ဆရာရေ… အဆီလည်း မကျချင်ဘူး အသားလည်း ဒီထက် မကျစ်ချင်ဘူး။ နည်းနည်းလေး ၀အောင်သာ ဘာဆေးသောက်ရမလဲ ဆိုတာ ညွှန်ကြားပေးပါဦး…. ခုဆေးနည်းသာ သောက်ရရင်တော့ မနော တစ်ယောက် အဟိ
ကျေးဇူးဘဲကိုထက်ဝေးရေ….။ဒါပေမဲ့ပြသနာတခုကမလေးရှားမှာရှောက်သီးမရနိုင်ဘူး..။ အဲဒီရှောက်သီးနေရာမှာဘာကိုအစားသုံးလို့ရမလဲ။ သံပုရာသီးဆိုရင်ကောရနိုင်မလား။ ဖြေပေးပါဦး။
သံပုရာသီးဆိုရင်တော့ မနက်ထဲက ၂လုံးကို လေးစိပ် မပြတ်စေနဲ့ စိပ်ပြီး
ပြုတ်ပါ။ ညနေကျရင်သောက်ပါ နည်းနည်းခါးတယ် ပျားရည်ရရင်ထည့် မရရင်မထည့်နဲ့
၃ရက်သောက်ပြီးရင် တစ်ရက် နှစ်ရက်နားပါ။သံပုရာရည်နဲ့ အပူဆေးတစ်မျိုးရောစပ်လိမ်းပါ
ညီမလေးမနော အကို ပြောထားတဲ့ အဆီကျ အသားကျစ်နဲ့ ပြောင်းပြန်နေပေါ့ကွာ
အဟဲ…စတာပါ ။ဆရာမလေးက ကြိတ်မှန်ရွက်နဲ့ တောကြက်ဥကြော်စားရမယ် ၃ရက်
ဆက်တိုက်ပေါ့။နောက် ဈေးမှာရောင်းတဲ့ ရှားဇောင်းလက်ပတ်ချက်ဆေး စားရမယ် တစ်နေ့
ကျေးဇူးပါ။ ပိန်ချင်နေတာနဲ့အတော်ဘဲ။ အရမ်းလည်းမခက်ဘူးဆိုတော့ လုပ်လိုက်မယ်နော်။
ကိုထက်ဝေးရေ ပျားရည်ဟောင်းဆိုတာ..ရှာရခက်တာမို့… ရိုးရိုးပျားရည်ဆိုရင်ရော..ဖြစ်ပါသလားရှင်..
ကျေးဇူးဘဲကိုထက်ဝေး…။ phone နံပါတ် ယူသွားပါတယ်။
အာနိသင်တော့ နည်းနည်းလျှော့တာပေါ့နော်။ကောင်းတာက ပျားရည်စစ်စစ်ကို မှာထားပြီး
သိမ်းထားရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ မရှင်းတာရှိရင် မေးပါဗျာ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုထက်ဝေးရေ… လောလောဆယ်တော့ ရိုးရိုးပျားရည်နဲ့ပဲ သုံးရတာပ… ပျားရည်စစ်စစ်ကိုသာ စောင့်ရရင် ကျမ သောက်ဖြစ်မယ် မထင်ပါကြောင်း…
ကျနော်က မျက်နှာနည်းနည်းဖောင်းနေလို့ မျက်နှာကျချင်တာ လူကမ၀ဘူး ဗိုက်လေးပဲနည်းနည်းထွက်တယ် မျက်နှာကလူနဲ့မလိုက်ဖူး ဖောင်းနေတာ
ခင်ဗျားမျက်နှာက ဖေါင်းနေတယ်ဆိုတာက မွေးရာပါလား ဒါမှမဟုတ်
ဖြစ်နိုင်ရင် ဖုန်းဆက်ပါဗျာ။သေချာသိရင် ဆေးရှိပါတယ်နော့
Dear Sayar Htet,
Please advise how to make some areas of dark skin purify and get healthy skin if you have an idea.